Somaliland oo Xukun Ku Ridey Diyaarad Ku Xanibneyd Hargeysa • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Somaliland oo Xukun Ku Ridey Diyaarad Ku Xanibneyd Hargeysa
Somaliland oo Xukun Ku Ridey Diyaarad Ku Xanibneyd Hargeysa
December 30, 2010 - By: Hanad Askar
Maxkmad ku taala Somaliland ayaa xukun ku ridey diyaarad ay sheegeen in ay sidey qalab mileteri kaas oo ay sheegeen in safarkeedu ku wajahnaa magaalada Bosaso ee Dawladda Puntland.
Maxkmadda ayaa ku xukuntey 6 duuliye oo u dhashey dalka Ruushka min hal sano oo xabsi ah iyo in midkastaa bixiyo 500$ dollarka Maraykanka ah, waxaana maxkmaddu u oggolaatey in ay gadan karaan xabsigooda.
Sidoo kale Maxkmadda ayaa ku xukuntey diyaaraddu in ay bixiso 23 milyan oo lacagta Somaliland ah, waxaana lagu eedeeyey in ay ku soo xadgudubtey hawada Somaliland.
Qalabka diyaaradda saarnaa oo isugu jirey dhar booshash iyo qalabka miinada lagu baaro dhamaanba ay la wareegto maamulka Somaliland.
Maxkmadda ayaa u cuskatey xukunka ay ridey in diyaaradda iyo duuliyaashuba ay taageerayaan ciidamo cadow ku ah xuduuda Somaliland waa sida ay hadalka u dhigeene.
Maamulka Somaliland ayaa horey u sii daayey qaarkamid ah dadkii saarnaa diyaaradda kuwaas oo ay ka mid ahaayeen suxufiyiin u shaqeynaayey telefishanka CBS kuwaas oo u dhashey dalka Koonfur Afrika, qoraal ay ka soo saareen markii ay ka baxeen Somaliland ayey ku sheegeen in ay aad ula yaabeen in funaanadaha iyo kabuhu ay yihiin qalab mileteri oo mamnuuc ka ah Somaliya.
Diyaaradan oo ay wadeen duuliyaal u dhashey dalka Ruushka ayaa soo caga dhigatey garoonka diyaarada ee Hargeysa taariikhdu markey ahayd 09.12.2010, sababta ay halkaas u fariisatey ayaa lagu sheegay in shidaalku ku yaraa waxaana oggolaansho siiyey maamulka Somaliland, inkasta oo markii danbe ay ku eedeeyeen in ay ku soo xadgudubtey hawdadooda.
Maamulka Somaliland ayaa qaylodhaan xoogleh ka muujiyey ciidamada badda ee Puntland ay dhisanayso waxayna ay sheegeen in diyaaraddan ay la xiriirto ciidankaas.
Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay cidda iska leh qalabka lala wareegay, sidoo kale waxaan war ahba ka soosaarin arinta maamulka Puntland.